Ahoana no To Pint Godaddy To Click Funnels - Lantonoara Of The Day
Ahoana no To Pint Godaddy To Click Funnels
Ary ianareo no tokony hianatra ny fomba pint GoDaddy mba tsindrio funnels amin'ny dingana tsotra telo.
Alohan'ny manomboka dingana izany ianao mba ho azo antoka ny sehatra ny fakany izany efa nanangana.
Rehefa afaka izany, tsy maintsy mandeha any dingana 1: mila mamorona Cname firaketana an-tsoratra ny hira ao amin'ny tranonkala dia atao rehefa mila haka ny DNS ny sehatra toe-javatra.
Ataovy azo antoka fa ny Cname amin'ny anaran'i izany WWW misy, indray mandeha ianao no hanova ny lasibatra ho niova ny clickfunnel namany Sary.
Rehefa avy dia atao any amin'ny dingana 2: hametraka ny fitsipika amin'ny alalan'ny scrolling nandroso teo amin'ny toe-javatra aloha, fisafidianana ny https://, miditra ny sehatra, mametraka azy ao amin'ny "maharitra" sy ny "handroso ihany".
Fanavaozam-baovao indray mandeha ary tehirizo.
Ankehitriny dia mandeha any ny faha-3 sy ny dingana farany: fampidirana ny sehatra amin'ny Clickfunnels.
Izany no mora indrindra satria iray ihany ianareo rehetra tsy maintsy manao izany ny tsindrio ny "sehatra efa misy mampiasa" safidy, fahan'ny ny sehatra, tsindrio eo amin'ny "nanao dingana" safidy, nifanerasera ny sehatra amin'ny lantonoara, ary hanamarina ny SSL.